Vaomieran'ny Fifandraisana | FKMP
Anisan'ny vaomiera tranainy indrindra eto amin'ny FKMP
Ny Vaomieran’ny Fifandraisana dia isan’ny Vaomiera tranainy indrindra misy eto amin’ny FKMP. Ny Konsily Vatikana II dia nametraka mazava fa ilain’ny Fiangonana ny serasera mba hampifandray ny vahoakan’Andriamanitra ho fanitarana ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly.
Ny tanjon’ny vaomiera
Mba tsy hisy tompon-trano mihono na zanak’Ikalahafa dia nankinina tanteraka amin’ny Vaomieran’ny fifandraisana ny fanentanana ny kristianina rehetra rehefa misy hetsika na zavatra atao ato am-piangonana. Ny tanjona dia ny hoe miray antoka amin’ny fampifandraisana ny kristianina amin’i Kristy, sy fampifandraisana ny kristianina samy kristianina, ary mampisokatra ny FKMP amin’ny any ivelany.
Ny andraikitra sahanin'ny vaomieran'ny FIFANDRAISANA
1. Fandraisana : Manomboka amin’ny fandraisana ny olona eny am-baravarana, ary tsindriana manokana amin’izany ireo endrika vaovao. Fametrahana azy ireny eny an-toerana.
2. Fandaminana anaty : Mandritra ny Lamesa, dia ny mpikambana ao amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana no mametraka ny olona ; manosika mandefa azy ireo amin’ny rakitra sy ny Komonio mba hilamina tanteraka ny fanaovana izany.
3. Fanisana ny Kristianina : Manisa ireo Kristianina tonga mivavaka isan’alahady izay misokajy roa samihafa dia ny olon-dehibe sy ny ankizy.
4. Fanisana lehibe na Recensement : Miandraikitra ny fandraisana ny mombamomba ny Kristianina tsirairay ary mampiditra izany ao anaty fichier de recensement. Marihina fa mijanona ho tsiambaratelo izany, ka tsy haparitaka na dia amin’ny Vaomiera hafa aza. Ny Pretra sy ny mpitan-tsoratry ny fiangonana no manana azy.
5. Fankalazana ny Litorizia : Rehefa andro lehibe na fety dia andraikitry ny Vaomieran’ny Fifandraisana ny mandefa ny videoprojection misy ny fandaharan-damesa sy ny tononkira.
6. Manomana sy mikarakara ny fizotran’ny fifidianana ny Prezidà eto am-piangonana :
– Fanavaona ny lisitr’ireo mpifidy.
– Fikarakarana ny biletàm-pifidianana
– Fandaminana mandritry ny fifidianana
– Fikarakarana ny vata fandatsaham-bato sy ny fanisam-bato.
7. Rehefa misy Matsom-panahy (Réco) Fety na hetsika samihafa ato amin’ny FKMP :
dia – ny Vaomieran’ny Fifandraisana no miandraikitra ny fisoratana anarana sy fizarana trano ary ny lakile ho an’ny Matsom-panahy ; fikarakarana ny badge sy ny fizarana ny tickets na atonta taratasy (documents).
– Raha mandeha Zaikabe na Zaikam-paritra dia izy no mandray ny fisoratana anarana ireo handeha. Miara-miasa amin’ny Vaomieran’ny Fitantanana izy eo amin’ny fitsinjarana ny olona ao anaty car, miandraikitra ny fandaminana ao anaty car mandritry ny trajet.
– Amin’ny Fetim-piangonana : Ny Vaomieran’ny Fifandraisana no miandraikitra ny badges ho an’ireo mpikarakara ka mandray ny anarany
– Miandraikitra ny supports : sonorisation, videoprojection
8. Manao tatitra an-tsary na an-tsoratra (reportage photos/video sy rédaction) : Mba hipetraka tahiry ny zavatra sy hetsika ataon’ny FKMP dia anjaran’ny Vaomieran’ny Fifandraisana ny manao firaketana an’ireny na ara-panahy izany na ara-batana.
Miisa telopolo (30) ny mpikambana ato amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana.
« Izay liam-baovao, no liam-pivoarana”, izany no filamatra iainan’ny Vaomieran’ny Fifandraisana eto amin’ny FKMP hatrany am-piandohana. Ary “Ny marina no haha olon’afaka anareo” (Joany 8, 32). Mankalaza ny faha- 60 taonan’ny FKMP isika izao. Ny soratra tokoa no mipetraka, rakitry ny lasa, andrin’ny ankehitriny, tsinjon’ny ho avy. Tsy nisaraka tamin’ny gazety, fitaizam-panahy, filazam-baovao, fialam-boly ny Fiangonana. Vary sy rano ireo ka tsy misaraka na mifanary.Ny gazetim-piangonana dia sady mampanakoako ny Vaovao Mahafalin’I Jesoa Kristy eo anivon’ny mpiara-belona, no endriky ny fisokafana amin’ny any ivelany.
Indro atao indray mitopy maso fohy aminao ny tantara manamarina an’izany
Ireo mpandrindran’ny Vaomieran’ny FIFANDRAISANA
Zoly Haingo RAKOTOMALALA